क. विवेकको कडा जवाफः बादलमा आत्केन्द्रित कुण्ठाकाे छटपटि, लिनप्यायोवादी प्रवृति भन्दै क. आलोकले गरेको टिप्पणी प्रमाणित - Everest Dainik - News from Nepal
बादल कमरेडले एलान गर्नु भएछ प्रचण्ड भर्सेस चुनाव लड्छु । ठीक हो कमरेड, तपाईं एमाले हो चुनाव लड्न पाईन्छ, लड्नुहोला चुनाव आउन १ बर्ष बाँकी छ मैदानमा फैसला होला । मैदानमा गरौंला । जनताले मैदानमा फैसला गर्लान् ।
तपाई केपी ओलीको बफादार कार्यकर्ताले प्रचण्डसंग चुनाव लड्छु भन्दा हामीलाई अनौठो मानिरहनु पर्ने छैन।
लेखकः विवेक शर्मा
कमरेड तपाईलाई लिनप्यायोबन्दी प्रबृत्ति भनेर त्यतिबेला दिवंगत नेता कमरेड यान प्रसाद गौतम आलोक भनेको कुरा आजसम्म आउँदा तपाईं आफैले प्रमाणित गर्नु भयो। अध्यक्ष प्रचण्डको तपाई प्रति प्रेम र बिश्वास धेरैनै माथि थियो । तपाईं मैसुर बैठक आसपासवाट अध्यक्ष प्रचण्डप्रति तपाइमा तुस पलाउन थालेको थियो। तपाईले चुनवाङ बैठकमा गरेको पक्षताप कृतिम मात्र रहेछ भन्नेकुरा पार्टी फुटाएर अध्यक्षलाई छाडेर हिडेपछी प्रष्ट भयो ।
तपाईहरूको पार्टीवाट बिप्लव कमरेड अलग भएपछी कमरेड मोहनबैध्य किरणलाई एक्लै छाडेर तपाईं कमरेड प्रचण्ड संग पार्टी एकता गर्न आउनु भयो । हामीलाई खुसीलाग्यो बुडाले आत्मरिलाईजेसन गरेछन् भन्ने लाग्यो । प्रचण्ड र बादलको मिलनमा पार्टीमा बेखुसी कोहि थिएन। कमरेड तपाईको जेजे डिमानहरू थिए कमरेड प्रचण्डले आँखा चिम्लिएर पुरागर्नु भयो, हामी खुसीनै भयौं । कमरेड प्रचण्ड ूनवसंसोधवादीू ूलालगध्दारू घोषणा गरेर पार्टी अलगगरि बाहिरिनु भएका तपाईं दुईबर्षपछि प्रचण्डलाइ माहान भन्दै एकतामा आउनु भयो । कमरेड प्रचण्डले बाटो फेरियो भन्नुभएको थियोर ?
तपाई पार्टी फुटाएर जादा एकीकृत माओवादीमा जुन बिचार लाईनथियो तपाईं पार्टी एकतामा आँउदापनि बिचार र लाईन बदल्लिएको थिएन। कमरेड प्रचण्ड आफ्नो लाईनमा दृढ र अडिग हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ। तपाईंले प्रचण्डलाई सहि ठानेर पार्टी एकतामा आएकोमा बादल बुडाको मति सप्रिएछ भन्ने हामिले बुझेका थियौं । तपाईं पार्टी एकतामा आएपछी कमरेड प्रचण्ड हौसिएर तपाईले जेजे भन्नुभयो त्यो त्यो छप्पडफारेर पुरागरिदिनु भएकै हो। तपाईं गृहमन्त्री पदासिन भएपछी छेपाराले रङ्गफेरे जसरि एकैचोटी केपी ओलीलाई माहान क्रान्तिकारी बिभुषण पहिर्याउदै कमरेड प्रचण्डका बिरूध्द जेहाद छेड्न तम्सनु भयो । आजभोलि एमालेवाट क। प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई गालि गरेर भाषण गर्दा तपाईंलाई एमाले भाषा बोल्न नजानेको देख्दा हाँसो लाग्छ । हाम्रो माओवादी भाषा सापट लिएर दक्षिणपन्थी,नव संसोधनवादी, प्रतिगामी भन्न हुन्छ रु यो आफु जहाँ उभिएको हो यो त आफ्नै खण्डन भएन र कमरेड ? चिन्तनको दरिद्रता र कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति धोकाको पराकास्टा हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लिनप्याओवादी प्रबृत्ती आत्केन्द्रित कुण्ठावाट पैदा हुने रोग हो । ब्यक्तीमा आत्मकुण्ठाले घरगर्दै गएर दक्षिणपन्थी अवसरवादी बिचारमा पतन हुन्छ ।
दक्षिणपन्थी अवसरवादले क्रान्तिकारी बिचार नेतृत्वप्रति प्रतिसोध र बदलाभव बोकेको हुन्छ । चिनमा माओ प्रशंसा गरेर नजिकैवाट सिध्याउने सडयत्र लिनप्योओले गरेका थिए । केपी ओलीलाई महान क्रान्तिकारी र कमरेड प्रचण्डलाई प्रतिक्रान्तिकारी देख्ने तपाईको अभिब्यक्ती र व्यवहार हेर्दा तपाईमा पक्षाताप र रूपान्तरण हिजो न आज कहिल्यै थिएन। थियो त अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वप्रति प्रतिसोध र बदलाभव भन्ने अझ छर्लंङ भएको छ ।